Natsangana Tamin’ny Maty i Lazarosy (Jaona 11) | Fiainan’i Jesosy
NY NANANGANANA AN’I LAZAROSY TAMIN’NY MATY
NANAO TETIKA HAMONOANA AN’I JESOSY NY FITSARANA AVO JIOSY
Nihaona teo akaikin’i Betania i Jesosy sy Marta ary Maria, ary nankany amin’ny fasan’i Lazarosy. Lava-bato izy io ary vato no teo amin’ny fidirana. Hoy i Jesosy: “Esory ny vato.” Tsy azon’i Marta ny tiany hatao, ka nanahy izy ary nilaza hoe: “Tompo ô, tsy maintsy maimbo izy izao, satria efa efatra andro izay.” Hoy anefa i Jesosy: “Tsy efa nilazako moa ianao fa raha mino ianao, dia hahita ny voninahitr’Andriamanitra?”—Jaona 11:39, 40.
Nesorina àry ilay vato. Niandrandra i Jesosy avy eo ary nivavaka hoe: “Misaotra anao aho, Ray ô, fa efa nihaino ahy ianao. Fantatro fa mihaino ahy foana ianao, fa noho ireto vahoaka mijoro manodidina ahy ireto no nilazako izany, mba hinoany fa ianao no naniraka ahy.” Nivavaka teo imason’ny olona i Jesosy ka fantatr’ireo nahita izany fa hanao zavatra noho ny herin’Andriamanitra izy. Niantso mafy izy avy eo hoe: “Ry Lazarosy, mivoaha!” Dia nivoaka i Lazarosy. Mbola nisy fehim-paty ny tongony sy ny tanany ary nisy fehy lamba ny tarehiny. Hoy i Jesosy: “Vahao izy, ka avelao handeha.”—Jaona 11:41-44.
Nahita an’io fahagagana io ny Jiosy maro tonga nampionona an’i Maria sy Marta ka lasa nino an’i Jesosy. Nisy kosa nankany amin’ny Fariseo ka nitantara ny nataon’i Jesosy. Novorin’ny Fariseo sy ny lehiben’ny mpisorona àry ny Fitsarana Avo Jiosy, anisan’izany i Kaiafa Mpisoronabe. Nitaraina ny sasany taminy hoe: “Inona no hataontsika, fa manao famantarana maro iny lehilahy iny? Raha avelantsika amin’izao izy, dia hino azy daholo ny rehetra, ary ho avy ny Romanina ka haka ny tempolintsika sy ny firenentsika.” (Jaona 11:47, 48) Tsy nahafaly azy ireo ny zavatra nataon’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesosy. Vavolombelona nahita maso ny “famantarana maro” nataon’i Jesosy anefa no nitantara izany tamin’izy ireo. Ny toerana notanany sy ny fahefany no tena noeritreretiny.
Tsy nino ny fitsanganana amin’ny maty ny Sadoseo ka voa mafy rehefa nitsangana tamin’ny maty i Lazarosy. Hoy i Kaiafa, anisan’ny Sadoseo: “Tsy mahalala na inona na inona ianareo, ary tsy ao an-tsainareo hoe tsara ho anareo raha olona iray no maty ho an’ny vahoaka, toy izay ny firenena iray manontolo no ho rava.”—Jaona 11:49, 50; Asan’ny Apostoly 5:17; 23:8.
‘Tsy araka ny nahim-pony no nilazan’i Kaiafa izany.’ Andriamanitra no nampiteny azy satria mpisoronabe izy. Te hilaza i Kaiafa fa tokony hovonoina i Jesosy, mba tsy hampihena kokoa ny fahefan’ny mpitondra fivavahana jiosy. Hita tamin’ilay faminaniana nolazain’i Kaiafa anefa fa ny fahafatesan’i Jesosy no anomezany ny vidim-panavotana. Tsy ho an’ny Jiosy ihany izany fa ho an’ny “zanak’Andriamanitra any am-pielezana” koa.—Jaona 11:51, 52.
Vitan’i Kaiafa ny nandresy lahatra ny Fitsarana Avo Jiosy mba hanao tetika hamonoana an’i Jesosy. Tsy fantatra raha i Nikodemosy no nilaza an’ilay tetika tamin’i Jesosy. Anisan’ny Fitsarana Avo Jiosy mantsy izy ary naman’i Jesosy. Na ahoana na ahoana, dia niala teny amin’ny manodidina an’i Jerosalema i Jesosy, ka tsy maty talohan’ny fotoana voatondron’Andriamanitra.
Nanao ahoana ny fihetsik’ireo nahita ny nananganana an’i Lazarosy tamin’ny maty?
Inona no mampiseho fa ratsy fanahy ireo anisan’ny Fitsarana Avo Jiosy?
Na dia nitetika hamono an’i Jesosy aza i Kaiafa, inona no faminaniana nasain’Andriamanitra nambarany?
Hizara Hizara Natsangana Tamin’ny Maty i Lazarosy